नेपाली हिमालमा अमेरिकी नागरिकको गैरकानुनी आरोहण, कुन हिमाललाई गरे हजुरआमाको नामाकरण ? - Asian Samachar
नेपाली हिमालमा अमेरिकी नागरिकको गैरकानुनी आरोहण, कुन हिमाललाई गरे हजुरआमाको नामाकरण ?
Asian Samachar बुधबार, मंसिर १, २०७३ (1 year ago) पर्यटन
काठमाडौं, अमेरिकी नागरिक सेन ब्रुचले नेपालका केहि हिमालको गैरकानुनी भ्रमण गरेका छन् । आरोहणका लागि खुला नगरेका हिमालमा अमेरिकी नागरिक ब्रुचले आरोहण गरेपछि उनीमाथी पर्यटन ऐन बमोजिम जरिवाना हुने भएको छ ।
अनुमति बिनाका हिमाल आरोहण गरेका ती अमेरिकी नागरिकलाई पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ३८ बमोजिम ३३ हजार डलर नगदसिहत कारबाही हुने भएको छ ।
्ब्रुचले नेपालका विभिन्न ३१ वटा हिमाल २१ दिनमै आरोहण गरेको दाबी गरिरहँदा हिमाल आरोहण अनुमति भने उनीसंग छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार उनले आरोहण दाबी गरेका हुम्ला जिल्लाका तीन हिमालमध्ये एउटाको आरोहण नै खुला भएको छैन । ब्रुचको यो आरोहण गैरकानुनी हो ।
अहिलेसम्म मानव पाइला नपरेको चण्डी हिमाल ९६१४२ मि०, चाङ्ला हिमाल ९६५६३ मि० को आरोहण गरेको उनको दाबी छ । यस बाहेक हुम्ला भ्याली रिजनको काङ्गुँ हिमाल आरोहण गरेको ब्रुचले वताएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यो हिमाल पनि आरोहणका लागि खुला नै भएको छैन । ब्रुचले आरोहण दाबी गरेको अन्य दुई हिमाल पनि ६ हजार मिटर माथिका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार ६ हजार मिटर माथिका हिमाल चढ्दा अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यी हिमालमा पर्यटन मन्त्रालयको अनुमति बिना नेपाली मात्रै चढ्न पाउँछन् भने विदेशीले आरोहण गर्न चाहेमा तीन जना नेपाली अनिवार्य लैजानुपर्ने प्रावधान छ ।
विदेशीले आरोहण अनुमतिसहति गार्वेज डिपोटिज, नेपाली कामदारको बिमा, हिमाल आरोहण जाँदा आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि ती अमेरीकी नागरिकले कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका हिमाल आरोहण गर्न सरकारले पाँच वर्षका निम्ति अनुमति शुल्क मिनाहा गरेको भए पनि आरोहण अनुमति भने अनिवार्य भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपालमा १३ सय १० हिमाल रहेको भए पनि सरकारले भने चार सय १४ वटाको मात्रै आरोहणका लागि अनुमति दिने गरेको छ । सरकारले आरोहण खुला नगरेको हिमाल आरोहण गर्ने नपाइने पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यो ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले आरोहणका लागि खुला नगरेको हिमाल आरोहण गरेमा सर्वोच्च शिखर आरोहणमा लाग्ने दस्तुरको तीन गुणा शुल्क जरिबानावापत दिर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण अनुमति शुल्क ११ हजार डलर रहेकोले कम्तीमा ३३ हजार डलर शुल्क जरिबाना लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।२१ दिनमा ३१ हिमाल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान राखेको दाबी गर्दै हिडेका ब्रुच द नेपाल ट्रस्टमार्फत आरोहणमा गएका हुन् ।
ट्रस्टले भने उनको दाबीलाई आधिकारिकता दिन प्रयास भइरहेको बताएको छ । उनले एउटा हिमालको नाम भने आफ्नै हजुरआमाको नामबाट नामाकरण गरेको दाबी गरेका छन् । ब्रुच मंगलबार नै अमेरिका फर्किएको नेपाल ट्रस्टको भनाइ छ ।सरकारले आरोहण खुला नगरेको हिमाल चढेको, एजेन्सी बिना गएको, नेपाली अनिवार्य जानुपर्नेमा नलगेको, पदयात्राको अनुमतिले पर्वतारोहणमा गएकोसहतिका कमजोरी भेटिएको पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए ।
उनका अनुसार ती अमेरिकी नागरिकले अपराध गरेको अनौपचारिक रूपमा जानकारी आइसकेको छ ।